Algolia: Ọchụchọ oge dị ka ọrụ | Martech Zone
Algolia: Ọchụchọ oge dị ka ọrụ
Mọnde, Febụwarị 17, 2014 Douglas Karr
Iwulite ikike ichota nke gi nke bu ọgaranya, ezigbo oge na ngwa ngwa bu ezigbo oru. Gbakwunye ya nyocha ala, onyonyo, azụmahịa na ekwentị yana ị na-emepe emepe niile. Naanị anyị na-agwa onye nrụpụta ụtụtụ a gbasara ike ọchụchọ ha yana na mmewere kwesịrị ka a kpọbawanye ya na saịtị ha.
Ọ dịghị mkpa ịzụlite nke gị - Algolia bụ ọrụ ọchụchọ akwadoro kpamkpam, dị ka REST API. API ndị ahịa dị maka isi ihe niile, nyiwe na asụsụ na ịnyefe data n'etiti ndị ahịa na ndị a API dị n'ụdị JSON.
atụmatụ nke Algolia
-Rụ Ọrụ Dị Elu - oge nzaghachi ruru 200 ugboro ngwa ngwa karịa Elasticsearch, wee ruo ugboro 20,000 karịa SQLite FTS4. Nkọwapụta bụ asynchronous ka ndị ọrụ nwere ike ịchọ sekọnd data ọhụrụ mgbe emelitere. Ha na-ekpughekwa ihe API maka ịlele ọnọdụ ndenye aha.
Nginx - Edere ntinye nke ihe nkesa nke Algolia na C ++ ma tinye ya dị ka usoro n'ime ihe nkesa HTTP arụmọrụ Nginx dị elu.
Dashboard - Otu eserese eserese maka arụmọrụ niile, gụnyere ojiji, arụmọrụ, ntọala, API ndekọ, API igodo na nchọgharị data.
Nchọta data - ezubere iji chọpụta ihe ndekọ, ọ bụghị ibe
A zuru okè ngwọta maka SQL na NoSQL ọdụ data, na a uzo ogo algọridim kachasị nke ọkara ahaziri data.
Multi-àgwà - na-anabata ụdị ihe na nọmba ọ bụla iji chọọ na.
Chọọ ka ị pịnyere - gafee mmecha ngwụcha dị mfe, ndị ọrụ na-enweta nsonaazụ ọchụchọ emelitere na leta ọ bụla ha pịnyere.
mkpa - nhazi ọkwa zuru oke na nke uzo. Algolia na-enye ụzọ kachasị mfe iji rụpụta nsonaazụ site na ewu ewu ma na-ejigidekwa mkpa.
mobile - emebere maka mkpanaka… ngwa ngwa, gbaghara typos na ụdị nsonaazụ site geo anya.
Ọmụmụ asụsụ - Chọọ n'asụsụ ọ bụla edere. Iji maa atụ, ịchọọ iji Chinese dị mfe nwere ike ịchọta hits dakọtara na Chinese ọdịnala.
Ndozi Typo - Algolia Ghọta ederede, ọbụlagodi na leta ole na ole mbụ, yabụ ndị ọrụ gị ka nwere ike ịchọta ihe ha na-achọ.
Nkọwapụta Smart - gosipụta otu ngalaba dabara na ajụjụ onye ọrụ, ọbụlagodi na ngalaba ahụ bụ naanị mkpụrụedemede izizi nke otu okwu ma nwee mkpụrụedemede.
Ezigbo oge - naanị njin ọchụchọ iji gosipụta ihu ka ị pịnyere, yabụ ndị ọrụ na-enweta nsonaazụ faceting mgbe mbido mbụ.
Nchọpụta ihe - ngosipụta hits site na anya, ma ọ bụ naanị ndị nọ nso, ma ọ bụ n'otu mpaghara. Gwakọta na ajụjụ ederede na atụmatụ ọchụchọ ndị ọzọ.
Nnukwu nnweta - a 99.99% SLA (nkwekọrịta ọrụ ọkwa). A na-edebanye ndenye data niile na sava atọ dị iche iche dị iche iche.
Ndị na-echekwa ọtụtụ ihe - debe oge nzaghachi dị ala site na ịhọrọ datacenter dịkarịrị ndị ọrụ gị.
Nchebe nke mbụ - API Igodo na-egbochi ịnweta otu ndeksi akọwapụtara, ma setịpụ oke dịka ọnụego ajụjụ kachasị maka adreesị IP, ma ọ bụ oge njedebe isi.
Tags: algolianchọta n'imenginxchọọ dị ka ọrụChọọ Marketing
Ezigbo Eziokwu Banyere Oru Ahịa Gị
Mgbanwe na mmefu ego 2014